Support ကိုခေါ်ပါ +86 15626227131
Main board motherboard
Arcade Push Button ကိုနှိပ်ပါ
မိမိကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုအရောင်းစက်၏ထိတွေ့မျက်နှာပြင် 270-1000pcs စွမ်းရည်
Doll Toy Crane Claw Machine ဒင်္ဂါးပြားအရောင်းအဝယ်ကြီးပူသည်
Lash Vending Machine Lashes ဆံပင်နှုတ်ခမ်းဆိုးအလှကုန်နှုတ်ခမ်းနီ
ပြောင်းဖူးပေါက်အရောင်းစက်အလိုအလျောက်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု 19 လက်မကြော်ငြာမျက်နှာပြင်
တယ်လီဖုန်း Claw ချီစက်စက်ကစားစရာ Plush ဆုပ်ကိုင်
Guangzhou Shuangqu Electronic Co. , Ltd.
ဖုန်း: +86 15626227131
ဘာလဲ: +86 15626227131
လိပ်စာ: NO.20 Xinshuikeng Villige Yingbing Panyu ခရိုင်ကွမ်ကျိုးစီးတီး ChinaDalong လမ်း
အလိုအလျောက်အပြည့် 24 နာရီ Self- ဝန်ဆောင်မှု bervergae အရောင်းစက်
Full-automatic self service vending machine, can sell cigarettes, betel nuts, အဖျော်ယမကာများ, condoms, sober medicine, masks, daily necessities, စသည်တို့. Only support QR code payments. [template id="981"]
စိတ်တိုင်းကျ Arcade Track Ball ကို ဦး ဆောင်နေသည့်အလင်းရောင်3အတွင်းပိုင်း 1
custom led lighting elf game 60 in 1 usb3in 1 led tracking ball arcade accessories/arcade track ball/track ball ♦Custom led lighting tracking ball (can custom color you like) ♦3 interface in 1 60 in 1 elf game 138/412/750/1162 in 1 usb ♦Super sensitive ♦The sensitivity is3times…
● Manufacturer: Scientific Games -Platform: Alpha2-Format: Five-reel, 10-, 20- or 50-line video slot -Denomination: .01, .02, .05, .10, 1.00 -Max Bet: 50, 200, 500 -Top Award: Progressive; reset at 1 million times denomination -Hit Frequency: 30.16%, 26.08%, 26.54% -Theoretical Hold: 4.01%-14.77% ● The series is being launched with…
gbs 8100 VGA to CGA converter JAMMA Arcade Game PCB Joypad အတွက်
gbs 8100 descriptions ● 5V IN (P1, P2) ပါဝါ input ကို: interfaces နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ, "+" + 5V DC ပါဝါ input ကိုချိတ်ဆက်နေသည်, နှင့်မြေပြင်ဝါယာကြိုး "-" တိုင်ကိုက်ညီ. ● VGA IN (P3) VGA ထည့်သွင်းမှု: VGA အရင်းအမြစ်သို့ဆက်သွယ်ပါ (ထိုကဲ့သို့သော HD ဂိမ်း VGA port ကိုအဖြစ်,…
Arcade T မှို T-molding အကျယ်နှင့်အရောင်ရွေးချယ်နိုင်သည့်
12/13/15/16/18/19/25/30mm width for choice, red/yellow/blue/green/white/black/chrome/gold for choice. Name Arcade t molding Size 12/13/15/16/18/19/25/30mm width Grill or net material plastic Width and color support custom Suitable for arcade game cabinet. Material: Plastic Length:3meter/roll Width: 12/13/15/16/18/19/25/30 (a tolerance of ±0.5 mm applies to width) Color: red / black / yellow…
4 Arcade Game Cabinet အတွက်လက်မ Speaker နှင့် Net Grill
Arcade game cabinet accessories4inch Silver dynamic loud Speaker Protective Grille circle and protective black iron mesh. Name Arcade game machine use speaker Size4inch Grill or net material Silver and plastic for choice Other speaker for choice: 2inch speaker, arcade console speaker,4inch thick antimagnetic speaker,…
1 စာမျက်နှာ 1 ၏ 1
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပါ၊ 24 နာရီ.
ဖုန်း +86 15626227131
လိပ်စာ NO.20 Xinshuikeng Villige Yingbing Panyu ခရိုင်ကွမ်ကျိုးစီးတီး ChinaDalong လမ်း
အလုပ်ချိန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပါ၊ 24 နာရီ.
Guangzhou Shuangqu Electronic Co. , Ltd. 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး သင်္ဘောပေါ်လစီပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
wechat QR ကုဒ်ကို x ပိတ်
သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုအရင်ဖြည့်ပြီး download လုပ်ပါ